Ukucoca iintlanzi | Ngeentlanzi
Enye yeentlanzi endizazi kakhulu kuba ndinayo, yintlanzi yokucoca iphuli, eyaziwa njenge pleco okanye catfish. Yintlanzi esetyenziselwa ukucoca i-aquarium nangona enyanisweni siyibona ishukuma kancinci, ayisiyiyo intlanzi yasemini kodwa yasebusuku kwaye inoxanduva lokutya ebusuku kuphela.
Le ntlanzi, edla ngokuba noxolo, inokufikelela kwiisentimitha ezingama-60 kwaye ihambe kancinci emini, enyanisweni ihlala kwindawo encanyathiselwe kwiglasi okanye ifihlwe phakathi kwezityalo ukuze ivele ngengomso kwenye indawo.
Ndiphawula oko idla ngokuba luxolo kodwa inyani yeyokuba ixhomekeke kakhulu kuhlobo ehlala kulo okanye kumhlaba ekuwo. Ayisiyo ntlanzi ehlaselayo ukuba ayinikwanga izizathu okanye uziva usoyika. Ngapha koko, enye yeengxaki ezinkulu, ubuncinci kum, kuxa kufuneka nditshintshe amanzi kwi-aquarium.
Le ntlanzi idla ngokuba njalo unameva emzimbeni wakho wonke Ukuzikhusela engozini (kungoko kucetyiswa ukuba ungachukumisi ngezandla zakho) kwaye xa sifuna ukuyisusa kwi-aquarium ukuyibeka okwethutyana kwenye, ukuba intlanzi inkulu inokuba namandla okuhlasela (I Andazi ukuba ukhe weva nantoni na ubona intlanzi ikhala kodwa le yenza). Kufuneka ube kakhulu Qaphela intloko yakhe nomlomo wakhe onamandla kuba iyadontsa umnatha kwaye ayiyiyeki de iqiniseke ukuba akukho bungozi. Kuya kufuneka ube nomonde kule ntlanzi malunga noku.
Ngaphandle koku, yi Intlanzi entle kakhulu xa ityhila amaphiko ayo (zombini ngaphezulu nasemacaleni nasemsileni), kuyabonisa kakhulu kwaye ukuba uyayazi indlela yokuyikhathalela ngokungathandabuzekiyo uyakufumanisa ukuba, rhoqo kwiinyanga ezimbalwa, iya kube ikhule ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi ecocekileyo
Molo, isicoci sam sinesisu esityebileyo
Molo, uyasebenza emanzini ashushu?
Ndibeke nje enye echibini lam malunga ne-300l kodwa, ndinofudo lwemephu olungeyonyani, njengoko lubonileyo luselulwalweni emazantsi, luzamile ukuluma, ndiyathemba ukuba khange lubangele monakalo
Phendula u-elisa cubas
Kufuneka wenze ntoni xa amanzi enamafu